Motobike Istanbul Diiwaanada Martida Booqashada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDiiwaanka Martida Maktabadda Motobike Istanbul Broke
24 / 02 / 2020 34 Istanbul, hawlaha, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY
martiyake istanbul booqde jebiyaa rikoor
In ka badan 110.000 oo booqdeyaal ah ayaa ku soo qulqulay Motobike Istanbul, oo ah xaflada ugu dhameystiran ee mootada iyo warshadaha baaskiilka, oo ay soo qaban qaabisay Messe Frankfurt Istanbul oo ay maalgalisay Motul. Carwadan, oo jabisay dhul cusub oo albaabada u furtay hadaf ah “Zero Carbon Fair”, ayaa diyaar u ah inuu dhirto geedaha iyada oo la raacayo yoolkan iyada oo wakiil ka ah ka qaybgalayaasha, kafaala-qaadeyaasha iyo duubista booqdayaasha.
Sannadkan, Motobike Istanbul waxaa lagu qabtay iyada oo la kaashanayo ururrada hoggaanka u ah warshadaha, Ururka Wershadaha Baaskiiladaha (MOTED) iyo Ururka Soo-saareyaasha Baaskiilka (MOTODER), iyo ka-qaybgalka 12,384 nooc oo ka kala socda 2 waddan oo ku yaal aagga 24 m285 taagan. Moodooyinka cusub ee la soo saaray, kuwaas oo sumcaddooda ku reebay carwadda, ayaa soo jiidatay dareen weyn, halka diiwaannada iibka la jebiyey.
Dhammaan ka qayb dunida Baaskiilka Turkiga iyo dalal qalaad, Kooxaha adduunka sida BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, King, Kuba, CF Moto, Vespa, Volta, SYM, Bajaj, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha iyo kuwo kaloo badan Wuxuu fursad u helay inuu arko moodellada cusub ee sumadda sharafta leh si dhow oo uu u helo macluumaad ugana faa'iideysto ololayaasha.
Tayfun Yardım, Maareeyaha Wada Shaqeynta Messe Frankfurt Istanbul; “Sannadkii 12aad ee Motobike Istanbul, waxaan qabanay 24 nooc oo ka socda 285 dal. Markaan nidhaahno 40% wadarta guud ee iibka mootada waxaa lagu hayaa cadaaladdeena sanad walba, waan ku faraxsanahay inaan aragno in aanan khalad aheyn ama aan xitaa ka badneyn tiradaasi. Sannadkan, waxaan ku dhawaaqnay inaan meel cusub ka jebin doonno magaalada Motobike Istanbul; Waxaan u dhaqaaqnay inaan xaqiijinno mashruucii ugu horreeyay ee "Zero Carbon Fair" ee waddankeenna, iyo tiro duub ah oo soo booqdeyaal ah ayaa naga taageeray inaan ku beero kumanaan geedo iyagoo matalaya dhammaan bandhigyadeena, kafaala-qaadeyaasha iyo booqdeyaashayada. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ku beero abuurka ilaa heer mashruucyadeena ah, oo aan gaarnay anaga oo kaashanayna Aegean Forest Foundation. ” ayuu yiri.
Barnaamijyada xafladaha iyo bandhigyada waxay ku guuleysteen qadarintii booqdayaasha carwada halka xitaa soojeedinta guurka laga helay
Hub fara badan ayaa sanadkan lagu saxiixay Motobike Istanbul. Mid ka mid ah dhacdooyinka xiisaha leh ayaa ah markii ugu horreysay ee sannadkan Tartanka Qurxinta Mootada ee Macaamiisha Waxa ay ahayd. Tartan adag waxaan www.thecustomfest.co Codsiyada lagu sameeyay tartankan waxaa qiimeeyay xeerbeegtida iyo mootooyinka mootada lagu qiimeeyo iyadoo loo eegayo shuruudaha qaarkood ayaa lagu abaal mariyey iyadoo lagu qiimeeyay kala saariddooda.
Motobike ayaa sidoo kale martigaliyay soo jeedinta guurka sanadkaan, iyadoo cadeyn uheysa cilaaqaadka ay la leeyihiin martidooda.
Birkan Polat, oo ku soo jiidatay bandhigyo mootada mootada ah, ayaa wakhtiyo xiiso leh u haystay jaceylka mootooyinka inta lagu jiro bandhiga. Iyada oo laga duulayo “Motobike Academy” oo ay maalgaliso Garanti BBVA, tababaro wadista mootada, wadahadalada mootooyinka iyo muusikada, wada hadalada lala yeelanayo gawaarida, waxaa raacay booqdayaasha cadaaladda ah.
Kafaala-qaadeyaasha Motobike Istanbul waa kuwo aad u xoog badan oo dhameystiran
Kafaala qaadka ugu weyn ee Motobike Istanbul 2020 waa astaanta weyn ee waaxda saliida macdanta. DHAQAN Inkastoo, Garanti BBVA Platinum iyo kafaalaqaadeyaasha carwada, Aytemiz Damaanadqaadaha Shidaalka, Caymiska Degdegga ah Damaanad-qaade Caymiska, OMM Kafaalasho waxbarasho, Metro FM sida kafaalasho raadiyaha
Waxay la wadaageen farxadda mooto iyo baaskiil wadayaasha muddo afar maalmood ah.
13. Taariikhaha Motobike Istanbul waa la shaaciyey
Motobike Istanbul, oo la qaban doono markii 2021-aad ee sannadka 13-ka, ayaa noqon doona goobta kulanka mootooyinka iyo baaskiillayda inta u dhexeysa Febraayo 25-deeda iyo 28-ka. Faahfaahinta carwada ayaa laga raaci karaa bogga rasmiga ah ee Motobike Istanbul, facebook iyo xisaabinta instagram.
Motobike Istanbul 2020 ayaa mar kale midab leh oo la yaab leh
Rikoodhkii booqdey booqashadii Erciyes
Diiwaanka booqashada ee Denizli Teleferik